ကျေးဇူးနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ ဘုရင် – WunYan
ကျေးဇူးနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ ဘုရင်
တစ်​ခါကဘုရင်​တစ်​ပါးရှိခဲ့တယ်​။ သူ့မှာအမဲလိုက်​​ခွေးဆယ်​​ကောင်​​မွေးထားတယ်​။ သူဝန်​ကြီး​တွေထဲက တစ်​​ယောက်​​ယောက်​အမှားလုပ်​ပြီဆို အဲ့ဒီ​ခွေး​တွေ​ရှေ့မှာ ပစ်​ချခိုင်း​လေ့ရှိတယ်​။​ ခွေး​တွေက အဲ့ဒီဝန်​ကြီးကို အရိုးအသား တစ်​ခြားဆီဖြစ်​​အောင်​လုပ်​ပစ်​လိုက်​တယ်​။
တစ်​​နေ့ ဘုရင့်​ရဲ့ အထူးအ​ရေးပါတဲ့ဝန်​ကြီး တစ်​ဦးက ဘုရင်​ကို မှားယွင်းစွာအကြံ​ပေးမိတယ်​။ ဒီအကြံကိုဘုရင်​က မနှစ်​မျို့ခဲ့ဘူး။. ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝန်​ကြီးကိုလည်း​ ခွေး​တွေ​ရှေ့မှာပစ်​ချဖို့အမိန့်​ချလိုက်​တယ်​။ ဝန်​ကြီးကဘုရင်​ဆီမှာ ​တောင်းဆိုမှုတစ်​ခုပြုတယ်။​
“ဘုရင်​ကြီးခင်​ဗျား ကျွန်​​တော်​ဘုရင်​ကြီးဆီမှာ ​နေ့မှန်းမသိ ညမှန်းမသိ အလုပ်​အ​ကြွေးပြုစုခဲ့တယ်​။ ခုဘုရင်​ကြီးက​တော့ ကျွန်​​တော့အမှား တစ်​ခု​လေးအ​ပေါ်မှာ ဒီ​လောက်​ကြီးမားတဲ့ ပြစ်​ဒဏ်​​ကို​ပေး​နေတယ်​။ ဘုရင့်​အမိန့်​အတိုင်း နာခံဖို့အသင့်​ပါပဲ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​အနွံတာခံ အလုပ်​အ​ကျွေးပြုစုခဲ့တာ​လေးကို ထောက်​ထားပြိး ဆယ်​ရက်​​လောက်​ ကျွန်​​တော့်​ကို အခွင့်​အ​ရေး​ပေးပါ။ ပြီးရင်​မုချ ကျွန်​​တော့်​ကို​ ခွေး​တွေ​ရှေ့မှာ ပစ်​ချလိုက်​ပါ”
ဒါနဲ့ဘုရင်​ကလည်း ဆယ်​ရက်​အခွင့်​အ​ရေး​ ပေးလိုက်​တယ။်​ ဝန်​ကြီးလည်း ဘုရင့်​ဆီက​နေ တန်းတန်းမတ်​မတ်​​ ခွေး​တွေကိုထိန်းသိမ်း​စောင့်​​ရှောက်​တဲ့ သူဆီကိုထွက်​လာတယ်​။.ပြီး​တော့​ခွေးထိန်းကို​ ပြောတယ်။
​”ငါဒီ​ခွေး​တွေနဲ့ ဆယ်​ရက်​​လောက်​ အတူ​နေချင်​တယ်​ သူတို့ရဲ့​ ဝေယျာဝစ္စအားလုံးလည်း တာဝန်​ယူမယ်​”
ခွေးထိန်းက ဝန်​ကြီးစကားကြား​တော့ အံသြ မှင်​သက်​သွားတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ခွင့်​ပြု​ပေးလုိက်​တယ်​။ အဲ့ဒီဆယ်​ရက်​အတွင်း ဝန်​ကြီးက​ ခွေး​တွေရဲ့ စား​သောက်​ဖို့အိပ်​ဖို့​ ရေချိုး​ပေးဖို့ကအစ အလုပ်​အားလုံးကို​ သေချာတာဝန်​ယူလုပ်​ကိုင်​တယ်​။ ဆယ်​ရက်​ပြည့်​​တော့ ဘုရင်​က သူ့အခိုင်းအ​စေ​တွေ ဝန်​ကြီးကို​ ခွေး​​တွေ​ရှေ့မှာ ပစ်​ချဖို့ အမိန့်​​ပေးတယ။်​.
ဒါ​ပေမယ့်​ အဲ့ဒီမှာရပ်​ကြည့်​နေတဲ့ သူ​တွေအားလုံး မြင်​ကွင်းကိုကြည့်​ပြီး အံ့အားသင့်​သွားကြတယ်​။ ဘာလို့လည်းဆို​တော့ ဒီ​နေ့ဒီအချိန်​ထိ ဒီ​ခွေး​တွေ​ရှေ့မှာ မ​ရေမတွက်​နိုင်​​အောင်​ ဝန်​ကြီး​တွေ အသက်​​ပေးသွားခဲ့ပြီးပြီ။ ဝန်​ကြီးတိုင်းကို အဲ့ဒီ​ခွေး​တွေက အပိုင်းပိုင်း အစစ လုပ်​ပစ်​ခဲ့တယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အဲ့ဒီ​ခွေး​တွေပဲ ဒီ​နေ့ဒီဝန်​ကြီးရဲ့​ ခြေ​ထောက်​​တွေကို ယက်​​ပေး​နေကြတယ်​။
ဘုရင်​ကလည်း ဒါကိုမြင်​​တော့ အံသြပြီး​မေးတယ်​။ ”​ ခွေး​တွေဒီတစ်​ခါ ဘယ်​လိုဖြစ်​သွားကြရတာလဲ?” ဆို​တော့မှ ဝန်​ကြီးကပြန်​​ဖြေတယ်​။
“ဘုရင်​ကြီးကျန်းမာပါ​စေ။ ကျွန်​​တော်​ဘုရင်​ကြီးကို ဒီမြင်​ကွင်းကိုပဲ ပြချင်​​နေတာပါ။ ကျွန်​​တော်​ဆယ်​ရက်​ပဲ ဒီ​ခွေး​တွေကိုပြုစုခဲ့တယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒီ​ခွေး​တွေက ဒီ​နေ့ကျွန်​​တော်​ပြုစု​စောင့်​​ရှောက်​ခဲ့တဲ့​ ကျေးဇူး​တွေကို မေ့မသွားခဲ့ဘူး။ ကျွန်​​တော်​ဟာ ဘုရင်​ကြီးဆီမှာ​ နေ့​ရောညပါ ဆယ်​နှစ်​ထိပြုစု​ စောင့်​​ရှောက်​ခဲ့တယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​လည်း ဘုရင်​ကြီးက ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အမှားတစ်​ခုအ​တွက်​ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ နှစ်​​ပေါင်းများစွာပြုစုခဲ့တာ​တွေကို ​ ကျောခိုင်းပစ်​လိုက်​တယ်​.”
ဘုရင်​ကသူ့ရဲ့အမှားအ​ပေါ်မှာ ပြင်းပြင်းထန်​ထန်​ ခံစားမိသွားတယ်​။ ဝန်​ကြီးကို အဲ့ဒီ​နေရာက​နေ ထသွားခိုင်းပြီး မိ​ကျောင်းကန်​ထဲကို ပစ်​ချခိုင်းလိုက်​တယ်။
“​ငယ်​ငယ်​တုန်းက ဖတ်​ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာ​လေးသတိ ရသွားတယ်​။ မတရားလုပ်​ဖို့ကိုပဲ စိ်​တ်​ပိုင်းဖြတ်​ထားတဲ့ သူတစ်​​ယောက်​ကို အ​ထောက်​အထား သက်​​သေ သာဓက​တွေ ပြ​နေရင်​လည်း အလကားပါပဲ။
Credit : ကိုဘုန်း
ကြေးဇူးနဲ့ မထိုကျတနျတဲ့ ဘုရငျ
တဈခါကဘုရငျတဈပါးရှိခဲ့တယျ။ သူ့မှာအမဲလိုကျခှေးဆယျကောငျမှေးထားတယျ။ သူဝနျကွီးတှထေဲက တဈယောကျယောကျအမှားလုပျပွီဆို အဲ့ဒီခှေးတှရှေမှေ့ာ ပဈခခြိုငျးလရှေိ့တယျ။ ခှေးတှကေ အဲ့ဒီဝနျကွီးကို အရိုးအသား တဈခွားဆီဖွဈအောငျလုပျပဈလိုကျတယျ။
တဈနေ့ ဘုရငျ့ရဲ့ အထူးအရေးပါတဲ့ဝနျကွီး တဈဦးက ဘုရငျကို မှားယှငျးစှာအကွံပေးမိတယျ။ ဒီအကွံကိုဘုရငျက မနှဈမြို့ခဲ့ဘူး။. ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝနျကွီးကိုလညျး ခှေးတှရှေမှေ့ာပဈခဖြို့အမိနျ့ခလြိုကျတယျ။ ဝနျကွီးကဘုရငျဆီမှာ တောငျးဆိုမှုတဈခုပွုတယျ။
“ဘုရငျကွီးခငျဗြား ကြှနျတျောဘုရငျကွီးဆီမှာ နမှေ့နျးမသိ ညမှနျးမသိ အလုပျအကွှေးပွုစုခဲ့တယျ။ ခုဘုရငျကွီးကတော့ ကြှနျတော့အမှား တဈခုလေးအပျေါမှာ ဒီလောကျကွီးမားတဲ့ ပွဈဒဏျကိုပေးနတေယျ။ ဘုရငျ့အမိနျ့အတိုငျး နာခံဖို့အသငျ့ပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောအနှံတာခံ အလုပျအကြှေးပွုစုခဲ့တာလေးကို ထောကျထားပွိး ဆယျရကျလောကျ ကြှနျတေျာ့ကို အခှငျ့အရေးပေးပါ။ ပွီးရငျမုခြ ကြှနျတေျာ့ကို ခှေးတှရှေမှေ့ာ ပဈခလြိုကျပါ”
ဒါနဲ့ဘုရငျကလညျး ဆယျရကျအခှငျ့အရေး ပေးလိုကျတယ။ျ ဝနျကွီးလညျး ဘုရငျ့ဆီကနေ တနျးတနျးမတျမတျ ခှေးတှကေိုထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျတဲ့ သူဆီကိုထှကျလာတယျ။.ပွီးတော့ခှေးထိနျးကို ပွောတယျ။
”ငါဒီခှေးတှနေဲ့ ဆယျရကျလောကျ အတူနခေငျြတယျ သူတို့ရဲ့ ဝယြောဝစ်စအားလုံးလညျး တာဝနျယူမယျ”
ခှေးထိနျးက ဝနျကွီးစကားကွားတော့ အံသွ မှငျသကျသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခှငျ့ပွုပေးလိုကျတယျ။ အဲ့ဒီဆယျရကျအတှငျး ဝနျကွီးက ခှေးတှရေဲ့ စားသောကျဖို့အိပျဖို့ ရခြေိုးပေးဖို့ကအစ အလုပျအားလုံးကို သခြောတာဝနျယူလုပျကိုငျတယျ။ ဆယျရကျပွညျ့တော့ ဘုရငျက သူ့အခိုငျးအစတှေေ ဝနျကွီးကို ခှေးတှရှေမှေ့ာ ပဈခဖြို့ အမိနျ့ပေးတယ။ျ.
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီမှာရပျကွညျ့နတေဲ့ သူတှအေားလုံး မွငျကှငျးကိုကွညျ့ပွီး အံ့အားသငျ့သှားကွတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ဒီနေ့ဒီအခြိနျထိ ဒီခှေးတှရှေမှေ့ာ မရမေတှကျနိုငျအောငျ ဝနျကွီးတှေ အသကျပေးသှားခဲ့ပွီးပွီ။ ဝနျကွီးတိုငျးကို အဲ့ဒီခှေးတှကေ အပိုငျးပိုငျး အစစ လုပျပဈခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီခှေးတှပေဲ ဒီနဒေီ့ဝနျကွီးရဲ့ ခွထေောကျတှကေို ယကျပေးနကွေတယျ။
ဘုရငျကလညျး ဒါကိုမွငျတော့ အံသွပွီးမေးတယျ။ ” ခှေးတှဒေီတဈခါ ဘယျလိုဖွဈသှားကွရတာလဲ?” ဆိုတော့မှ ဝနျကွီးကပွနျဖွတေယျ။
“ဘုရငျကွီးကနျြးမာပါစေ။ ကြှနျတျောဘုရငျကွီးကို ဒီမွငျကှငျးကိုပဲ ပွခငျြနတောပါ။ ကြှနျတျောဆယျရကျပဲ ဒီခှေးတှကေိုပွုစုခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီခှေးတှကေ ဒီနကြေှ့နျတျောပွုစုစောငျ့ရှောကျခဲ့တဲ့ ကြေးဇူးတှကေို မမေ့သှားခဲ့ဘူး။ ကြှနျတျောဟာ ဘုရငျကွီးဆီမှာ နရေ့ောညပါ ဆယျနှဈထိပွုစု စောငျ့ရှောကျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဘုရငျကွီးက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အမှားတဈခုအတှကျ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာပွုစုခဲ့တာတှကေို ကြောခိုငျးပဈလိုကျတယျ.”
ဘုရငျကသူ့ရဲ့အမှားအပျေါမှာ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ခံစားမိသှားတယျ။ ဝနျကွီးကို အဲ့ဒီနရောကနေ ထသှားခိုငျးပွီး မိကြောငျးကနျထဲကို ပဈခခြိုငျးလိုကျတယျ။
“ငယျငယျတုနျးက ဖတျခဲ့ရတဲ့ ကဗြာလေးသတိ ရသှားတယျ။ မတရားလုပျဖို့ကိုပဲ စိတျပိုငျးဖွတျထားတဲ့ သူတဈယောကျကို အထောကျအထား သကျသေ သာဓကတှေ ပွနရေငျလညျး အလကားပါပဲ။
Credit : ကိုဘုနျး